Daawo Muuqalka”Shirkadda Telesom Oo $35,000 Ugu Deeqday Mashruuca Caruurta Danyarta Ah Ee La Nool Xanuunka Macaanka+Daawo Sawiro | Berberatoday.com
Daawo Muuqalka”Shirkadda Telesom Oo $35,000 Ugu Deeqday Mashruuca Caruurta Danyarta Ah Ee La Nool Xanuunka Macaanka+Daawo Sawiro
Hargeysa(Berberatoday.com)-Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee Telesom ayaa $35,000 ku wareejisay maamulka Cusbitaal Global Polyclinic, lacagtan oo ay shirkaddu ugu deeqdo xanaanaynta Caruurta la nool xanuunka macaanka oo ay shirkaddu maal-galinayso sanadkasta. Munaasibadda ay shirkaddu lacagta ku wareejinaysay ayaa ka dhacday xarunta cusbitaalka ee magaaladda Hargeysa.
Maamuluhu isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi, “Shanktii sanno ee u dambeeyey shirkadda Telesom waxay cusbitaalka Global Polyclinic kala shaqaynaysay caruurta macaanka la nool ee danyarta ah, mashruucaasi oo muddo badan soo socday, sanadkii ugu horeeyey 50 qof ayaa lagu bilaabay, maalinba meel bay soo marayey. Hadda 150 qof ayey shirkaddu ka bixisaadawadda iyo dhaqaalaha ku baxaya anagoo iska kaashanayna cusbitaalka Global Polyclinic. Runtii waa shirkadda u heelan inay u gargaarto ummaddeeda wixii taagteeda ah maadaama ay ka shaqaysato, kuna heliso wixii ay ka faa’iiday bulshaddeeda. Waxaa kale oo xilweyni uu naga saraan yahay, caafimaadka, waxbarashadda, ciyaaraha iyo qaybaha kale ee bulshadd. ”, Sidaasi waxaa yidhi Mudane Darbo.
Dr. Cabdirisaaq Yusuf Axdar oo ka hadlay munaasibadan lacagta lagu wareejiyey oo ka dhacday cusbitaalka Global Polyclinic ayaa yidhi, “Waa runtii farxad weyn noo ah in Shirkadda Telesom ay 5-tii sanno u dambeeyeynagala shaqeynaysay xanuunka macaanka ee caruurta danyarta ah. Inay maanta nagu guddoonsiiso lacag $35,000 ah oo loogu talo-galay ciyaalkaa danyarta ah in wax loogu qabto, ayaa farxad noo ah. Lacagtaasi inta badan waxaa loo isticmaalaa in bilkasta lagu siiyo dawadda Insulin-ta ah, waxaan kaloon ku siinaa istiriibiska ilaa 25 xabo ama hal baakidh, waxaa kaloo la siiyaa istiriibiskii wax lagu mudaayey, waxaa kaloo la siiyaa mishiinadda, waxa kaloo la siiyaa baadhitaano lagula soconaayo xaaladahooda. Caruurta xanuunsatana waa la keenaa wixii suurto-gal ah ee loo qaban karano waanu u qabanaa.Waxaanu shirkadda Telesom uga mahadnaqaynaa iyagoo daryeelka bulshadda qayb-weyn ka ah khaasatan ciyaaladda baahan, waxaanay runtiiku suntan tahay oo ay ku amaanan tahay in wixii ay macaashtay ay bulshadeedii badh ku soo celinayso, runtii waa arin aad u qiimo badan.”